राष्ट्र बैंकले उदारता देखाउँदा हाम्रो नाफा बढी देखिएको हो
अन्तर्वार्ता राष्ट्र बैंकले उदारता देखाउँदा हाम्रो नाफा बढी देखिएको हो वसन्त लम्साल– प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका वसन्त लम्साल हाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् ।
पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्र आफ्नो मूल्य र मान्यता भुलेर बढी नै नाफा केन्द्रित भइरहेको आरोप लागिरहेको छ ।
कोभिड–१९ पछि लघुवित्त व्यवसायको अवस्था, लघुवित्तको व्यावसायिक शैली, लघुवित्तका चुनौती तथा लघुवित्तले खेप्ने गरेको विभिन्न आरोपलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीको लागि विजय पराजुलीले लम्सालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोभिडले लघुवित्त व्यवसायमा कस्ता प्रभाव र असरहरु पर्‍यो ?
सुरुको चरण निकै नै असहज थियो । मनोवैज्ञानिक, मानसिक असर सबैभन्दा धेरै परेको छ । सुरुमा लकडाउनको चरणमा मुभमेन्ट भएन, व्यापार–व्यवसाय सबै ठप्प भयो भने आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएको अवस्था थियो । त्यसले ल्याएको असहज अवस्थाले अहिले पनि मान्छे पूर्ण रुपमा मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
तर, अहिले धेरै कुरा नर्मल अवस्थामा फर्किएको छ । तैपनि, कोभिडले पुर्‍याएको असर र पुनः दोस्रो चरण आउने हो कि भन्ने डरले मान्छे कन्फिडेन्ट हुन भने सकेका छैनन् । आजको दिनमा व्यापार–व्यवसाय नर्मल अवस्थामा देखिए पनि हिजोको दिनमा भएको घाटा कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ । त्यसैले केही समय अझै पनि प्रभाव रहने देखिन्छ ।
सरकारी निकायबाट भएको अध्ययनले कोभिडको प्रभाव घरेलु तथा साना उद्योगमा परेको जनाएको छ । लघुवित्तले काम गर्ने क्षेत्र पनि घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले साना उद्योग भनेको पनि हामीले लगानी गरेको भन्दा ठूलो हुन्छ । ५० लाख, एक करोड लगानी भएकालाई पनि साना उद्योग मानिन्छ । हामीले १०/१५ लाखसम्मको व्यवसायमा लगानी गर्ने हो । ती व्यवसायमा पनि कोभिडको प्रभाव पर्‍यो नै । अब चलाउन नसक्ने नै अवस्थामा केही व्यवसाय रहे पनि धेरैजसो व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा फर्किएका छन् ।
लघुवित्तको ठूलो लगानी व्यापार तथा कृषि, पशुपालनमा रहेको छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा हिजोको घाटा आफ्नो ठाउँमा भए पनि आजको दैनिकी नर्मल अवस्थामा आएको छ । उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसाय एकपटक बन्द भएपछि पूर्ववत् अवस्थामा आउन केही असहज देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कोभिडपछि अधिकांश व्यवसाय नर्मल अवस्थामा आउका छन् । प्रतिशतमा हेर्न हो भने समस्यामा रहेको कर्जा थोरै छ ।
लघुवित्तले आफ्नो मूल्य र मान्यता भुलेर बढी नै व्यापारिक भए भन्ने आरोप लागेको छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
जुन आरोप लागेको छ, त्यो तथ्यगत होइनजस्तो लाग्छ । यसमा दुईवटा कुरा छ । पहिलो कुरा, हिजोको संरचना तथा परिवेश र आजको संरचना तथा परिवेश फरक छ । पहिले नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात एनजीओको माध्यमबाट आएको हो । एनजीओ हुँदा कम गर्नु र कर्पोरेट क्षेत्र भएर काम गर्नुमा फरक हुने नै भयो ।
हिजो एनजीओमा कसैको लगानी थिएन । कसैले सेयर लगानी गरेको थिएन । एनजीओ हुँदा कसैले नाफाको कुरा गरेको थिएन । तर, आज हरेक सेयर होल्डरले नाफा चाहियो भन्छ । त्यसकारणले हिजो र आजमा फरक प्रवृत्ति छ । हिजोको एनजीओको मानसिकतामा रहँदा लघुवित्तले सामाजिक काम गर्ने हो र गरिबको उद्धार मात्रै गर्ने भन्ने छ भने त्यो गलत मानसिकता हो । वित्तीय संस्था भएपछि वित्तीय रुपमा पनि ‘सस्टेन’ हुनुपर्छ । लघुवित्तले व्यवसाय पनि गरेका छन् र नाफा पनि गरेका छन् ।
लघुवित्तलाई गरिबको सेवा गर्ने संस्थाको रुपमा लिए पनि लिखत रुपमा त्यो कुरा कतै उल्लेख छैन । बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जति कर्पोरेट ट्याक्स तिरेको छ, लघुवित्तले पनि त्यति तिरेको छ । त्यसले बैंकहरु र लघुवित्तमा कहाँबाट फरक पर्‍यो त ? कि त कर छुट दिनुपर्‍यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहको छ । अन्य वित्तीय संस्थाको बराबर कर तिरिरहेको छ । लघुवित्तले गाउँमा गरिबसँग काम गरेको छ भन्दैमा यसले गरिबको उद्धार गर्ने मात्रै भन्ने हैन नि । यसको प्रकृति नै गरिबभन्दा पनि साना व्यवसायीसँग काम गर्ने हो ।
लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुई प्रकारका छन् । एउटा सामाजिक कार्य भन्ने गरिन्छ । बंगलादेशको मोहमद युनिस्कोको कन्सेप्टबाट आएको छ । बंगलादेशमा अझै पनि हाम्रोभन्दा पुराना लघुवित्तहरु नाफामुखी नभएर एनजीओको रुपमा चलेका छन् । पश्चिमाहरु, विश्व बैंक, आईएमएफ, यूनडीपीहरुले भने फाइनान्सियल सम्भाव्य पनि हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । यसमा दुई प्रकारका विचार रहेका छन् । आ–आफ्नो व्याख्या भइरहेका छन् । कसैले गरिबको सेवा गर्ने र कसैले फाइनान्सियल सर्भिस दिने हो भन्छन् ।
हाम्रो प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा हेर्न हो भने सामाजिक काम गर्ने, च्यारिटी गर्ने भन्ने छैन । तर, त्यो भन्दैमा नाफा नै प्राथमिकता भन्ने हैन । लघुवित्तले गाउँमा गएर काम गर्दा उचित (रिजनेबल) वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने हो । अत्यधिक नाफा लिएर सेवा दिने हैन ।
राष्ट्र बैंकले हामीलाई नियमन गरेको छ । अत्यधिक ब्याज लियो र नाफा कमायो भन्ने ठाउँ छैन । अहिले १५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत ब्याज लिनासाथ राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा गाउँ–गाउँमा गएर वित्तीय सेवा दिनु भनेको आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो ।
लघुवित्तले गाउँ–गाउँ दुर्गममा वित्तीय सेवा पुर्‍याएको छ । यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा गाउँका साहु–महाजनले पैसा दिँदैनन् होला ? अहिले गाउँका महिलाहरुले केही काम गर्छु भन्दा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहज रुपमा पैसा त पाएका छन् । लघुवित्तले बदमासी गर्ने, बढी पैसा लियो भने उजुरी गर्ने ठाउँ रेगुलेटर छ नि ।
लघुवित्तको नाफा कसरी बढी भयो भन्ने कुरा हामीले हेरेका छैनौँ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई काम गर्न सक्ने जुन प्रकारको उदारता देखाएको छ, जसले गर्दा लघुवित्तको नाफा बढी भएको हो । सानो पुँजीले हामीले धेरै व्यवसाय गर्न सक्छौँ । जसले गर्दा थोरै मार्जिन राख्दा पनि नाफा धेरै हुन्छ । मार्जिन धेरै राखेर धेरै ब्याज असुल गर्दा लघुवित्तको नाफा बढी भएको हैन ।
विजय लघुवित्तकै उदाहरण दिँदा वर्षमा खर्च कटाएर १ प्रतिशत मात्रै मार्जिन राख्दा पनि चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत रिटर्न आउँछ । खर्च कटाएर १ प्रतिशत मार्जिन राख्नु अत्यधिक हो त ? लघुवित्तलाई काम गर्ने लिभरजले गर्दा नाफा उच्च देखिएको हो, भोल्युममा लघुवित्तको नाफा वर्षको ७/८ अर्ब न हो ।
यहाँले लघुवित्तले ग्रामीण भेगमा बैंकिङ सिकाएको छ, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ भन्नुभयो । त्यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो केही समययता लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो र त्यसले समाजमा विकृति बढायो भन्ने आरोप छ नि ?
यो कुरा हो, म स्वीकार गर्छु । हामी संख्यात्मक रुपमा बढी छौँ । तर, सबै ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको होइन । केही निश्चित ठाउँमा भएका छन् । त्यसको एउटा कारण भनेको हामी लघुवित्त संस्थाहरु नै हौँ ।
यसमा लघुवित्त दर्ताको कुरा पहिले आउँछ । कसले यति धेरै संस्थाहरु बनायो त ? हाम्रो पोलिसीमै कहीँकतै कमजोरी भयो कि । संख्यात्मक रुपमा ९० वटा लघुवित्त नेपालको लागि चाहिने थियो कि थिएन ? पक्कै पनि थिएन । यो सबैले महसुस गरेको कुरा हो । हामी पनि घटाउन लागिरहेका छौँ । सबैको चासो लघुवित्त धेरै भयो यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने छ । तर, धेरै कसले बनायो ? यो प्रश्न हो ।
धेरै संस्था भएर एकै ठाउँमा काम गर्दा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ । त्यस क्रममा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो ।
अहिले पनि ग्रामीण भेगमा वित्तीय सेवा पुगेको छैन, एकै ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा त्यो ठाउँमा सेवा दिने ठाउँ त थियो नि ?
ठिक हो, तपाईंले भनेको । अझै पनि वित्तीय सेवा नपुगेका धेरै ठाउँ छन् । तर, हुम्लामा जाने हो भने लघुवित्त अहिले पनि सस्टेन गदैन । त्यहाँ भनेको घाटा नै हो । त्यस्तो ठाउँमा काम गर्न राज्यको पोलिसी चाहिन्छ । त्यस्तो ठाउँमा काम गर्नेलाई सहुलियत दिने, त्यस्तो ठाउँमा शाखा खोलेर काम गर्ने संस्थालाई २/३ करोड बिनाब्याज फन्ड दिने हो भने त्यो संस्थाले त्यहाँ काम गर्न सक्छ ।
लघुवित्त संस्थाको सेवा खर्चिलो छ । दुर्गमा जाँदा घाटा हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको सीमामा बसेर सुगममा नै बसेर काम गर्ने लघुवित्तको प्रवृत्ति भएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यले नै गर्नुपर्छ र त्यस किसिमको नीति आवश्यक छ । फोर्स गरेर बाध्यात्मक पार्नेभन्दा पनि सहुलियत कसरी दिने, नीति आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले एउटा वडामा दुईवटा लघुवित्तका शाखा खोल्न पाइँदैन भनेको छ । यसले बजारमा शाखा खोलेर बस्ने अवस्था छैन । अब विस्तार हुँदा स्वाभाविक रुपमा लघुवित्त ग्रामीण भेगमा जान्छन् । यद्यपि, राज्यले नीतिगत रुपमा नै सहुलियत दिने हो भने प्रोत्साहन हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा जाँदा बैंकले सहुलियत पाउँछ भने लघुवित्तलाई पनि क्षेत्र तोकेर यो क्षेत्रमा गयौ भने बिनाब्याज यति स्रोत राज्यको तर्फबाट यति समयको लागि पाउँछौ भन्यो भने प्रोत्साहन गर्छ । यो सकारात्मक मोटिभेसन भयो भने अर्को, तिमीहरु यो ठाउँमा गएनौ भने कारबाही गर्छौँ भन्ने नेगेटिभ मोटिभेसनले पनि हुनसक्छ ।
नेपालमा लघुवित्तको संख्या कति चाहिने हो भनेर कतैबाट पनि अध्ययन भएको छैन । हामीले के आधारले मर्जर भनेका छौँ र नेपालमा लघुवित्तको संख्या कति आवश्यक हो ?
संख्या यति नै चाहिने भन्ने ठ्याक्कै त हुँदैन । मोटामोटी यति भए पुग्छ भन्ने हो । मैले सार्वजनिक रुपमा भन्ने गरेको छु । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्था हेर्दा एउटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरको तीनवटा र राष्ट्रियस्तरको १० वटा गरी ३०÷३१ वटा भयो भयो भने प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । यसो भन्दैमा २९ वटा हुन नहुने हैन ।
तर, अहिलेको अवस्थामा ३०/३२ वटा संस्था भयो भने राम्रो कभरेज गर्न सक्छौँ र गुणस्तरीय सेवा दिन पनि सक्छौँ भन्ने लाग्छ । यो रिसर्च गरेर यति नै भन्ने कुरा हैन । वाणिज्य बैंक कति चाहिन्छ भनेर पनि अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन । तर, घटाउनुपर्छ भन्ने आइरहेको छ । २६÷२७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिँदैन भन्ने पनि थाहा छ । बेलायतजस्तो अर्थतन्त्रमा पाँचवटा मात्रै वाणिज्य बैंक छ ।
त्यसैले रिसर्च गर्दै यति हो भन्ने हुुँदैन । तर, मोटामोटी यति भए पुग्छ भन्ने हो । लघुवित्तको केसमा प्रतिस्पर्धाको लागि पनि प्रत्येक प्रदेशमा तीनवटा चाहिन्छ । कम भयो भने पनि मोनोपोली हुन्छ । तर, धेरै भयो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त संख्या २५÷३० वटामा झर्नुपर्छ भन्ने गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा नम्बर ६० हाराहारीमा आउने अवस्था देखिएको छ । अब ६० वटा लघुवित्तलाई दुईवटा मिलेर एक हौ भन्ने प्रोत्साहनमूलक निर्देश्न भयो भने त ३०÷३१ वटामा आइहाल्छ । तर, मर्जरमा जान सुविधा दिएर प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक मात्रै गरेर हुँदैन । यसले सबैलाई राम्रो गर्छ । संस्थाको खर्च घट्छ, इफिसिएन्सी बढ्छ । संख्या घटाउँदै जाँदा कभरेज घटाउन हुँदैन, त्यसमा ख्याल भने गर्नुपर्छ ।
लघुवित्तले सधैँजसो गर्ने गरेको गुनासो हामीलाई स्रोतको अभाव भयो भन्ने छ । अहिले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता हुँदा तपाईंहरुलाई समस्या नहोला तर, कर्जाको माग बढ्दै छ भने बैंकहरुले पनि सोझै सानो कर्जा लगानी गरिरहेका छन्, यसले तपाईंहरुको स्रोत झनै संकुचन हुने देखिन्छ । विदेशबाट स्रोत ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि भयो तर, प्रभावकारी भएको देखिएन, के हुनसक्छ यसको समाधान ?
राष्ट्र बैंकले विदेशबाट स्रोत ल्याउन खुलाएको हो । तर, हाम्रो नेपालको लघुवित्तको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले धेरै कम छ । भारत, बंगलादेशजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा पनि लघुवित्तको २४/२५ प्रतिशत ब्याजदर छ । हामीले १५ प्रतिशतमा दिन्छौँ भन्दा अचम्म मान्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग मैले व्यक्तिगत रुपमा धेरै पहल गरे । उनीहरुले १०/१२ प्रतिशतमा मात्रै पैसा दिन सक्ने कुरा गरे । जुन हामीले कर्जा लगानी गर्ने रेट हो । हामीले ६/७ प्रतिशतसम्म लिन सक्छौँ भन्दा उनीहरु दिन तयार भएनन् ।
यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा धेरैपटक राष्ट्र बैंकमा सुझाव दिएका छौँ । लघुवित्तको स्रोतको लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्छ । राज्यले ठूला–ठूला विश्व बैंक, एसियालाी विकास बैंकजस्ता संस्थाहरु सहुलियत दरमा ऋण दिन सक्छन् । जस्तै, हाइड्रोपावर, एयरलाइन्समा सरकारले १/२ प्रतिशतमा ऋण दियो भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै, विदेशी दातृराष्ट्रहरुले पनि सहुलियत दरमा ऋण दिन्छन् ।
राज्यले गर्‍यो भने विनिमय दरमा हुने उतार–चढावलाई कभर गर्न पनि सक्छ । यस्तो निकायबाट ऋण लिएर राज्यले कोष स्थापना गर्न चाह्यो भने २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्बौँ स्रोत जुटाउन सक्छ । यसमा कोष सञ्चालनको लागि ३ प्रतिशत र ३ प्रतिशत अन्य खर्च गरेर ६ प्रतिशतमा लघुवित्तलाई ऋण दियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ । हाम्रो माग भनेको यस्तो कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भनेको हो, जुन सम्बोधन भएको छैन र त्यो कसले कसरी चलाउने भन्ने सहज पनि छैन । केही छलफल भइरहेको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकबाट सहज रुपमा स्रोत पाए पनि ब्याजदर तलमाथि भइरहन्छ र भोलि पुनः पाइँदै नपाइने अवस्था आउनसक्छ । उहाँहरुले विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गरे भने स्रोत नहुन पनि सक्छ । यो जोखिम हाम्रो लागि जहिले पनि छ । यसको लागि हामीले पहल गरेका छौँ । तर, राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन सकेका छैनौँ ।
यस्तो कोष भएर ६ प्रतिशत अथवा ८ प्रतिशतमा तिम्रो सोच सुनिश्चित छ, यसमा ६ प्रतिशत अप्रेसन खर्च र १ प्रतिशत नाफा राखेर १५ मा लगानी गर भन्दा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले त वाणिज्य बैंकको ब्याजदर १०/१२ प्रतिशत भयो भने लघुवित्त ३ प्रतिशतले धान्नसक्छ ।
अब लघुवित्तलाई राज्यले कुन रुपमा लिन्छ । भोलि लघुवित्त नै आवश्यक पदैन पो भन्छ कि ! चारखम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई भनेको छ । भोलि सहकारीले नै गाउँ–गाउँमा सेवा दिने पो हो कि । लघुवित्त बन्द नै गर्ने हो कि ! यो त राज्यले कसरी लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
लघुवित्तमा एनजीओको लगानीको विषयमा प्रश्न उठिरहन्छ । पछिल्लो समय कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयले नै पनि कतिपय लघुवित्तको प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन नै रोकेको अवस्था छ । यो कसरी व्यवस्थापन हुँदै छ ?
यसमा हामीले लघुवित्त एसोसिएसनको तर्फबाट धेरै पहल गर्‍यौँ । सचिव तथा मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलमा पनि यसलाई संशोधन गर्ने भन्ने भएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । यसमा लघुवित्तहरुले धेरै नै झमेला भोगिरहेका छन् ।
कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा हाम्रो ऐनले नै रोक्छ । हुँदैन, तपाईंहरु संशोधन गरेर ल्याउनुहोस्, उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । हाम्रो नियमले दिँदैन भन्ने जुन तर्क उहाँहरुले राख्नुभएको छ, त्यो त्यति मनासिब देखिँदैन ।
नियम बनेपछि पालना गर्नुपर्छ । तर, एनजीओले बिजनेस गर्ने हैन भन्ने तर्क उहाँहरुले प्रयोग गर्नुभएको छ । तर, लघुवित्तको लाभांश एनजीओको नाफा हुँदैन । उसले प्राप्त गर्ने नाफा फन्डको रुपमा आउँछ र त्यसले विकासको काम गर्छ । त्यो विकासको काम कहाँ प्रयोग गर्छ, त्यो पैसा कहाँ प्रयोग हुन्छ, त्यसको सही सदुपयोग हुन्छ कि हुन्छ कि हुँदैन विकासमा लगानी हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न निकाय त अर्को छ नि ।
जिल्लामा सीडीओ कार्यालय र केन्द्रमा समाजकल्याण परिषद् छ । मनिटरिङ त त्यहाँ गर्नुप¥यो नि । एनजीओलाई त अहिले नेपाल सरकारले अनुदान ल्याउन दिएको छ नि । अर्बौँ अनुदान त आएको छ । त्यहाँ पनि एनजीओको सञ्चालक अथवा समितिले पैसा मिसयुज गरेको होला नि ।
यो पनि त अनुदान आएजस्तै अनुदान नै भयो । यो एनजीओको आम्दानी भयो । अर्ब रुपैयाँ ल्याउँदा अर्को १०/२० लाख ल्याउँदा के फरक पर्‍यो त एनीओलाई ? यसले सबै गभर्नेन्स बिग्रँदैन नि । राज्यले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो एनजीओको पैसा कहाँ प्रयोग भएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ ।
मानौँ, विजय लघुवित्तमा लगानी गरेबापत एउटा एनजीओले वर्षको पाँच लाख उसले रिटर्न पायो । विजय लघुवित्तको सेयरहोल्डरको लागि त्यो नाफा हो । तर, एनजीओको ट्रेजरीमा त्यो नाफा देखिँदैन, त्यो आम्दानी हो । त्यो व्यवस्थापन गर्न चुक्यौँ, राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन । तर, यसले पैसा नै पाउनु हुन्न भनेर रोकिदियो । एनजीओले पैसै नपाउने हो भने डोनेसन ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन ? मेरो प्रश्न । पाउँछ । र, लिइरहेको छ ।
अब अन्त्यमा, विजय लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ ?
हामी राम्रो अवस्थामा छौँ । बिजेनसको हिलाबले विस्तारै ग्रोथ गरिरहेका छौँ । व्यावसायिक भोल्युम विस्तारै विस्तारै बढाएर एउटा लेभलमा स्टेबल भएको छ । हाम्रो क्यापासिटीको हिसाबले राम्रोसँग व्यवसाय बढाएका छौँ । एक–दुई वर्ष शाखा विस्तार गर्‍यौँ, त्यसलाई क्वालिटी मेन्टेन गर्न लागेका छौँ ।
जोखिम सबैको बढेकोले जोखिम कम गर्न जोड गरेका छौँ । जोखिम कम गर्न व्यावसायिक बनाउने, सदस्यलाई जथाभावी लगानी नगर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ । फाइनान्सियली र सामाजिक रुपमा विजय लघुवित्त राम्रो पोजिसनमा छौँ । साइजको हिसाबले धेरै प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ । पुँजी र व्यवसायको हिसाबले धेरै ठूलो संस्था लघुवित्त व्यवसायमा हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ पछि सेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । कारोबार रकम र बजार परिसूचकमा नयाँ नयाँ रेकर्ड... ९ घण्टा पहिले
घरेलु मैदानमा वैशाख ४ गतेबाट त्रिकोणात्मक सिरिज हुँदैछ । त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजमा नेदरल्यान्ड, मलेसिया र घरेलु टोली... शुक्रबार, चैत २७, २०७७
महाधिवेशनसम्म शेरबहादुर देउवा प्रतिस्पर्धामै रहनुहुन्न
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीम जुटेको छ । नेतृत्वमा आकांक्षी धेरै छन् । सभापतिको दौडमा रहेका एकजना केन्द्रीय... बुधबार, चैत २५, २०७७
प्राथमिक उपचार नपाउँदा अधिकांश जलेका बिरामीको मृत्यु
नेपालमा वर्सेनि कम्तिमा ५० हजार जना आगोले जलेर घाइते हुन्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै आगोले... शुक्रबार, चैत २०, २०७७
बिमामा अभिकर्ता मात्रै हैन, कर्मचारी र व्यवस्थापकलाई नै तालिमको आवश्यकता छ
काठमाडौं । विवेक झा नेपाली जीवन बिमा बजारको चिरपरिचित नाम हो । बिमा क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरुको प्रवेश भए पनि भर्खरै... मंगलबार, चैत १७, २०७७
केपी ओली नक्कली एमाले हुन् पार्टी छाडेर गए हुन्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका दुईजना नेताहरुलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । उनले सोमबार माधवकुमार... सोमबार, चैत १६, २०७७